အမြင်အာရုံအတွက် ဝေါဟာရများကို အသံများ၊ ပုံများ နှင့် Videos များဖြင့်သင်ကြားပေးသည်။
နေ့စဥ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် စီစဥ်ထားသည်
အမြင်အာရုံအတွက် ဝေါဟာရများကို စနစ်တကျ သင်ကြားပေးရန်အတွက် တန်ဆာပလာ။ ဘာသာစကား တိုးတက်လာစေရန်အတွက် အရေး နှင့် အပြော အတွက်စာလုံးများကို ပုံများ၊ အသံများ နှင့် Videos များ နှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။.
စာလုံးအရေအတွက်ပေါင်း ၆,၀၀၀ ကျော်ပါဝင်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် စာလုံးများနှင့် အသံများလည်း ထပ်၍ထည့်နိုင်သည်။ စာလုံးတစ်လုံးထဲ၌ မတူညီသော အသံထွက်များရှိနိုင်ပြီး၊ ပုံများစွာကို Sound Effect နှင့် Video (Video အပိုင်းလည်းရွေးနိုင်သည်) ထဲ၌သုံးနိုင်သလို၊ စာလုံးတစ်လုံးအတွက်လည်း ပုံများစွာ ထည့်သုံးနိုင်သည်။ ဤနောက်ဆုံးထွက် Version သည် StoryMaker နှင့်တွဲဖက်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Window Vista 10 ၌ သုံးနိုင်သလို၊ Window 8 နှင့် အထက်ရှိသော Touch Screen Tablet များတွင်လည်း သုံးနိုင်သည်။.
Multimedia flash cards ၌ စာသားများ၊ ပုံများ၊ အသံထွက် စာလုံးများ ၊ စာလုံးများအတွက် Sound Effect နှင့် Videos (သင့်လျော်သလို) များပါဝင်သည်။
Database ထဲ၌ စာလုံးပေါင်း ၆,၀၀၀ ကျော်ပါဝင်ပြီး၊ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို စာလုံးများ၊ ပုံများ၊ အသံများ နှင့် Videos များလည်းကိုယ်တိုင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။
အမြင်အာရုံအတွက် ဝေါဟာရ သင်ရန်အတွက် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီအတွက် စာလုံးအစုများကို သီးသန့် ဖန်တီးမည်
Flashcards အတွက် အထူးစီစဥ်ထားသော စာသား၊ ပုံ, Video၊ Sound Effect နှင့် စာလုံးအသံထွက်များ ကို ဖွင့်ပေး ပြီး လေ့လာမှုကို ပို၍ ကောင်းမွန်စေရန် ၄င်းတို့တစ်ခုချင်းစီ၏ ကြားထဲ၌ အချိန်အပိုင်းအခြား ကို သတ်မှတ် ပေးသည်။
ကျောင်းသားများအနေနှင့် ပုံအချင်းချင်း၊ ပုံနှင့် စာလုံး (သို့) စာလုံးနှင့် စာလုံး များသို့တွဲနိုင်ရန် Lotto Board ထဲရှိ စာလုံးအစု များကို သုံးပါ။
Lotto Boards ကို လေးထောင့်ပြား ၄ခု၊ ၆ခု (သို့) ၉ခု ခု ထိပြရန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Video အပိုင်းတစ်ပိုင်း (သို့) အခြား Effects များကို Lotto Set လုပ်ပြီးသွားသောအခါ သုံးပါ။
StoryMaker Program နှင့် Integrates လုပ်ခြင်းဖြင့် စာလုံးများ၊ ပုံများ စသည်တို့ကို Program တစ်ခု၌ ထည့်လိုက်လျှင် နောက် Program တစ်ခု၌ လည်းရရှိနိုင်သည်။ Flashcards ထဲ၌ရှိသော စာလုံးအစု များကို StoryMaker စာအုပ်များ တွင် တိုက်ရိုက် ဖန်တီးနိုင်သလို၊ Flashcards မှ စာလုံးအစု များကိုလည်း StoryMaker အတွက် စာလုံးအစု ( Stories များဖန်တီးရန်အတွက်) အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
Flashcards ကို Microsoft Windows ထည့်ထားသော ကွန်ပျူတာ (သို့) Tablet တို့နှင့်သုံးနိုင်သလို၊ မဝယ်ခင် အစမ်း Download ပြီးလည်းသုံးနိုင်သည်။ ဘာသာစကားများစွာဖြင့်ရနိုင်ပြီး၊ ဘာသာစကားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပေးသောစနစ်ဖြင့် စီစဥ်ထားသောကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေနှင့် ဘာသာစကားအသစ်များကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်။ .
လိုအပ်ချက်မျာ: Microsoft Windows PC (သို့) Windows 8 (သို့) နောက်မှ။ အကယ်၍ နောက်ဆုံးပေါ် Windows Updates များကို Installed မလုပ်ထားပါက၊ ပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ပြဿနရှိပါက၊ Windows Updates များနှင့် Optional များကို Download ပြီး Installed လုပ်ရမည်။ ထိုနောက်မှ၊ တစ်ခါထပ် Installing လုပ်ကြည့်ပါ။ Windows 10 နှင့်၊ အနည်းဆုံး Anniversary Update ကို Installed လုပ်ထားရမည် (သို့ Creators update လည်းပို၍ကောင်းသည်)။ ဤအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို သိရှိလိုပါက Google လုပ်ပြီးရှာကြည့်ပါ။
မှတ်ချက်: ဤ Downloads များသည် အစမ်းသုံ Version နှင့် Full Version များဖြစ်ကြသည်။ StoryMaker ၏လက်ရှိလိုင်စင်ကို Update လုပ်လိုလျှင်၊ သင့်လျော်သော Version ကို Download ပြီး Installed လုပ်ရမည်။
Canton ဗားရှင်း (HK)
ကျွန်ုပ်တို့၏ Software နှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးလိုပါတယ်။ အောက်ပါ လျှောက်လွှာကို ဖြည့်ပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖြေကြားပေးသွားပါမည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်ဝယ်ယူလိုသော လိုင်စင်ကို ရွေးပါ ဤ လိုင်စင် သည် တစ်နှစ်တစ်ခါ သက်တမ်းတိုးရသော လိုင်စင်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဆက်လက်အသုံးပြုလိုပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန် လိုအပ်သည်။
Single user USD $ 14.00
Site licence (1-10 users) USD $ 42.00
ဆက်လက် ဝယ်ယူရန် ဆက်သွားမည်